Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Abagqatswa abayi-8 kunyulo lukaNobhala Jikelele we-UNWTO
Iindaba zeBahrain Breaking • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziPhukileyo zaseGeorgia • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
The Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) Ndiqinisekisile namhlanje kwi "Qaphela Verbale" ukuba izicelo ezisi-8 ezivela kubagqatswa abakhuphisana nesithuba sikaNobhala-Jikelele we-UNWTO zifunyenwe.
UNobhala we-UNWTO uthe abafaki-zicelo abayi-6 abawabandakanyi amaxwebhu afunekayo, ke ngoko, abayithobeli imigaqo.
Okwangoku lishiya olu gqatso lube ngabaviwa ababini kuphela:
UNks Shaikha Mai bint Mohammed Alkhalifa ovela eBukumkani baseBahrain
UMnu Zurab Pololikashvili waseGeorgia
Ngaphandle kokwenza intlanganiso ingenzeki kwabanye kwaye inzima kwabanye, uMnu Pololikashvili, onguNobhala Jikelele wangoku, usanyanzelisa ukuba kubekho iseshoni ye-113 yebhunga elilawulayo eza kubanjwa ngoJanuwari 18-19 eMadrid, eSpain. Ngo-Septemba, u-Nobhala-Jikelele ophikisanayo kwiseshoni ye-112 yeNdibano yesiGqeba esiLawulayo kwilizwe lakhe lase-Georgia ukuba intlanganiso kaJanuwari iyakuba lula ukudibana FITUR, umboniso wezorhwebo waminyaka le eMadrid.
Kwiveki nje emva kwentlanganiso yaseGeorgia, i-FITUR yahlehliselwa uMeyi 19-23, 2021 ngenxa yokuvalwa kwe-COVID eSpain. Ukuba le ntlanganiso ibizakuhlala ngoJanuwari, amalungu eBhunga elinoLawulo oluPhezulu ngekhe akwazi ukuthumela abaphathiswa babo kwintlanganiso enjalo ngokukhuselekileyo, beshiya ivoti ezandleni zabasebenzi bozakuzo.
Umnumzana Pololikashvili wayengummeli wase-Georgia eSpain kwaye unxibelelana kakuhle noluntu loonozakuzaku baseMadrid. Oku kucace gca kuNks Shaikha Mai bint Mohammed Alkhalifa ovela eBukumkani baseBahrain.
Umnumzana Pololikashvili sele ebonakalisile ukuba injongo yakhe yayikukwenza ukuba ukhuphiswano lube nzima nokuba kungenakwenzeka ukuhambisa unyulo kuJanuwari 2021 kunye nomhla wokugqibela wabagqatswa abatsha ukuba babhalise ukusuka kuJanuwari 2021 ukuya ku-Novemba 2020. Isisombululo esifanelekileyo bekuya kuba kukunika ngaphezulu hayi kancinci ixesha ngexesha lobhubhane wehlabathi.
Ngoku kusezandleni zala mazwe alandelayo ukubhenela kuNobhala-Jikelele we-UNWTO ngoku ukuguqula intshukumo yentlanganiso ye-113th yeBhunga eliLawulayo ukuvumela ukuba kubekho intlanganiso ebonakalayo kunye nomgqatswa okhuphisanayo waseBahrain ukuba azilungiselele kwaye amlungiselele unyulo. Njengokuba ixesha leeholide lisondele, olo lungiselelo lokuzimasa intlanganiso ngexesha lokuvala i-COVID-19 kunokubonwa njengokusetyenziswa gwenxa kwegunya nguMnumzana Pololikashvili.
eTurboNews Ufumene uluvo oluyimfihlo lokuba uZurab waziswa lilungu leBhunga elinoLawulo oluPhezulu ecela utshintsho kumhla wentlanganiso kaJanuwari ukuya kumhla omtsha we-FITUR ngoMeyi, kodwa uNobhala-Jikelele wenqabile ukwala.
I-FITUR yayisesona sizathu sokuba intlanganiso yatyhalelwa kuJanuwari. Kuba i-FITUR ikwangoku ngoMeyi, kutheni le nto imihla yeentlanganiso zeBhunga eliLawulayo ingenakulungiswa? Impendulo icacile, kwaye iarhente emanyeneyo ye-UN kufuneka ingathathi cala kwaye ingathathi umdla welizwe elinye kunelinye.
Ngamalungu e-UNWTO Executive Council kuphela avota kunyulo olutsha lukaNobhala Jikelele. Nabani na ophumeleleyo kufuneka aqinisekiswe yi-General Assembly ngo-Okthobha u-2021.
Amalungu angama-35 okuvota ngoku: